Alicia eme, celebrity, celebrity, omee, omee, actresses, music, biography, onye ọbụ abụ, onye ọbụ abụ
Alicia eme, site na aha nwaAlicia J. Augello-Cook(* 25. 1981 January, Manhattan, New York, USA) bụ American na-agụ egwú nke R & B na mkpụrụ obi, songwriter, pianist, na-emeputa, philanthropist na mgbe ụfọdụ omee na-ede akwụkwọ. Alicia bụ a ma ama na-ese bụ onye rere 28 nde albums na kpọrọ na emewo meriri ọtụtụ enọ - iri na anọ Grammy Awards, iri na otu German Music Awards na atọ American Music Award.
A mụrụ ya Irish-Italian nne Terri Augello na nna Jamaican nna Craig Cook na New York, Manhattan. Terri bụ onye na-eme ihe nkiri na onye inyeaka na ụlọ ọrụ iwu, ya mere o tolitere na ebe dara ogbenye na ebe a na-akpọ Hell's Kitchen n'ime ụlọ. Na 1985, tinyere ụmụ nwanyị ndị ọzọ, e nyere ya ohere igosi obere ọrụ n'otu akụkụ nke usoroThe Cosby Show. Mgbe ọ dị afọ asaa, ọ malitere ịkpọ piano ma kpọọ òtù ndị Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart na Frédéric Chopin kachasị amasị ya. Na iri na anọ, o dere abụ mbụ ya bụ "Butterflyz", bụ nke o mesịrị dee na mpido mbụ ya. Nne na nna ya gbawara mgbe ọ ka dị obere, n'ihi ya naanị nne ya gụrụ akwụkwọ iji nyere ya aka ịzụlite nkà egwú ya. Na 2005, ndị nta akụkọ kọrọ na ọ gbalịrị ime ka nna ya dịghachi.Ma ọ gọrọ agọ ma kwuo na okwu ya ezighi ezi.
Mgbe ọ dị afọ iri na isii, ọ gụsịrị akwụkwọ na "Professional Performing Arts School", n'agbanyeghị na a nabatara ya University of Columbia na akwụkwọ agụmakwụkwọ, o kpebiri na ọ ga-ahọrọ ịrụ ọrụ egwu ya. O tinyere aka na ya na Jermaine Duprim na aha ya bụ So So Def. O dere ma dekọọ abụ "Dah Dee Dah (Sexy Thing)", nke pụtara na ụda ụda maka fim "Men in Black". Nke a bụ ọkwa mbụ ọkachamara ya, ma ọ dịghị mgbe a tọhapụrụ ya dị ka otu na nkwekọrịta ya ngwa ngwa kwụsị. Mgbe e mesịrị, ọ zutere Cliff Davis, bụ onye bịanyere aka na ya na "Arista Records," mana e mesịrị zigara ya ụlọ ọrụ ndekọ ya "J Records". O dere abụ "Oké Nkume na U" na "Anya Na-ahụ Anya", nke pụtara na ụda ụda maka "Shaft" na "Dr. 2 Dolittle ". Alicia wepụtara ya album mbụ na 2001Egwú na obere.
Egwú na obere (2001)
Nke a album bụ ụbọchị mbụ nke ire (5. 2001 June) rere karịa 50 000 iberibe ke akpa urua n'elu 235 000 iberibe n'ụwa nile na ndị ọzọ karịa 12 nde. O meela ka ewu ewu ya ma na United States ma karịa. N'ala ala ya, ọ ghọrọ onye ọhụrụ na-ere ọhụrụ na 2001 (yana onye na-ere ahịa R & B). Nke mbụ "Fallin '" bụ izu isii n'elu bọmbụ Billboard Hot 100. Na "America: A Tribute To Heroes," nke bụ otu nkwekọrịta bara uru maka usoro 11. Septemba 2001, Alicia jiri abụ Donny Hathaway na-akpọ "Otu ụbọchị, anyị niile ga-enwere onwe anyị". Onye ọzọ, "A Woman's Worth," bịara na top US 10. Alicia nwetara akara ise Grammy na 2002, gụnyere onyinye kachasị mma na Newcomer Award na Abụ nke Afọ (Fallin 'Song). 22. October 2002 wepụtara otu ọba egwuEjiri eme ihe & Wepu ya na obere, reeditions ọchaEgwú na obere, nke bụ abụ asatọ na ọkpụkpọ asaa ndị a na-enweghị ike ịpịpụta nke Alicia.
Ndị nkatọ na-ekwu banyere album ahụ n'ụzọ dị mma. Alicia nwere ike ijikọ ụda nke 70. dị ka Curtis Mayfield, Marvin Gaye na Stevie Wonder, na mkpuchi hip hop dịka Lauryn Hill, Erykah Badu na D'Angelo.
Onyonyo nke Alicia Key (2003)
O weputara ọba akwukwo dika onye ozoAchịkọ nke Alicia igodonke 2 bipụtara. December 2003. E katọrọ album ahụ ma bụrụ onye mbụ na US. N'ime izu mbụ nke ire ere, a na-ere ya site na 618 000, nke bụ ọnụahịa nke isii kachasị ọnụ ahịa maka onye na-ese ihe na ọnụahịa kachasị elu nke abụọ maka ndị ọrụ R & B. Ruo ugbu a, 9 rere ya ọtụtụ nde mmadụ. Singles "Ị Amaghị Aha M" na "Ọ bụrụ na Ọ bụghị Gị" batara n'ime top5 na otu "Diary" na top10. Naanị "Karma" mere ka ọ bụrụ nke iri abụọ, mana na "Top 40 Mainstream" sụgharịrị, ọ bụ na 3. ebe. Onye otu "Ọ bụrụ na enweghị m gị" ghọrọ onye mbụ ị ga-anọgide na chaatịBillboard Hot R & B / Hip-Hop Songsihe karịrị otu afọ, na-akarị abụ "Nwa gị" site Mary J. Blige. Alicia ghọrọ onye na-ere ahịa R & B kachasị mma na 2004.
Ahịa on "MTV Video Music Awards 2004" merie ndị award maka kasị mma R & B video (Ọ bụrụ na m na ọ bụghị Wee na Ị) na nke a otu ihe na-agbata n'ọsọ e ọdịda a afọ mgbe e mesịrị maka video "kama". Na Grammies 2005 rụrụ "Ọ bụrụ na m na ọ bụghị nwetara gị" na-sonyeere Jamie Foxx na Quincy Jones, na ọnụ ha bụrụ abụ abụ "Georgia on My Mind", mere ma ama site Ray Charles. N'uhuruchi ahụ, o meriri Alicia anọ enọ na Best R & B Album, Best Olu Performance (n'ihi na Ọ bụrụ na m na ọ bụghị nwetara gị), Best R & B Song ( "ị na-amaghị My Name") na Best Olu R & B arụmọrụ duo ma ọ bụ ìgwè ihe abụ "My Boo," nke ọ na-abụ abụ na Usher. Onu ogugu ndi mmadu choro ma ha enwetaghi ha bu album nke afo, oburu na enweghi m gi.
Na egwu na Lisbon na 2008
14. 2005 na-egwu na MTV Unplugged na Brooklyn Academy of Music. N'oge arụ ọrụ a, ọ na-abụ abụ ya, bụ nke o nyere ya aka dị iche, ọ bụrụkwara ọtụtụ mkpuchi. N'etiti ndị na-ege ntị, e nwere ndị omenkà soro ya na-eme egwuregwu a. Ha bụ ndị na-eme ihe ngwa ngwa, Mos Def, Damian Marley na Maroon 5 vocalist Adam Levine (onye ọ bụ abụ ọ bụ abụ "Rolling Stones" anụ ọhịa).
Ọ bụrụ abụ abụ bụ "Every Little Bit Hurts," bụ nke Aretha Franklin ma ọ bụ Brenda Holloway gụrụ. O weputara ya ohuru ohuru ndi ozo: "Oge ugha," nke o dere na onye mmeputa Lamont Green na "Unbreakable," nke di na 4. tinye na chaatịGermanR & B / Hip-Hop, na ebe iri atọ na anọ nke Billboard Hot 100. Na chaatịGermanOkenye R & B Airplay ọbụna nwere izu iri na otu na mbụ. 11 tọhapụrụ egwu niile. October 2005 ma na CD na DVD ma kpọọ aha naanịEwepughi ya. Na chaatịGerman200 bu ụzọ buru ụzọ zụọ 196 000 n'izu mbụ nke ire ere. Ka ọ dị ugbu a, e rere ya otu nde na United States. Ngwá egwu egwu ya na-enweghị ihe ịga nke ọma bụ MTV Unplugged kemgbe Nirvana. E nominated anọ Grammy Awards - Best Female Olu R & B Performance (maka Unbreakable), Best Olu Performance - Traditional R & B (n'ihi na ọ bụrụ na m gị Woman), Best R & B Song (Unbreakable) na kacha mma R & B album.
Element nke Freedom (2009)
Alicia na Ngwá Ahịa American Music 2009
A na-ewepụta akwụkwọ nke anọ nke studio The Element of Freedom na December 2009. The album bụ nke abụọ na US Billboard 200 eserese ma rere 417 otu puku akwụkwọ maka izu mbụ nke ire ere. Nke a abughi onye mbido n'elu ihe odide akuko British.
O mechara nyochaa, gụnyere Ben Affleck, Ray Liotta, Common, Andy Garcia, Jeremy Piven na Ryan Reynolds,Umu Smokin. 26 pụtara na cinemas. January 2007. Onye na-egbu ọchụ bụ Georgie Sykes na-akpọ ya. Ndị ọrụ ibe ya toro ya, Ryan Reynolds kwuru na ọ na-eme ihe ọ bụla, o juru ya anya na ọ dịtụbeghị mgbe ọ na-eme ihe nkiri na fim.
Ke adianade do, enye ama okokụre uwụtn̄kpọ ibaIhe Nanny Diariestinyere Scarlett Johansson. Enyi ya kacha mma nọ na fim ahụ.
Na njikwa njikwa ya Jeff Robinson, ọ bịanyere aka n'akwụkwọ azụmahịa nke ga-emeghachi ihe nkiri "Bell, Book and Candle" site na 1958. A ga-enwe amoosu n'ime ya.Ya na Robinson kwukwara ụlọ ọrụ telivishọn "Big Pita".Ihe oru mbu ha ga-abụ usoro nke dabeere na nchetara Alice mgbe ọ bụ nwata dị ka mulatka na-eto eto na New York City.
Na fimNgwakọta na Black na Whitega-ada nwa agbọghọ nke nwere ezigbo onyinye maka ịkpọ piano.Ọ bụ ihe nkiri dabere na biography nke Philippe Schuyler.
Na egwu na Tokyo na 2008
Ọ na-arụ ọrụ ebere. Ọ bụ ọnụ na-ekwuru maka Keep and Child Alive, òtù na-abụghị nke na-enye ọgwụgwọ nye ezinụlọ Africa ndị ọrịa AIDS na-emetụta. Alicia dere na-agụ egwú Bono U2 a cover nke song "Ekwela Nye Up" (mbụ site Peter Gabriel na Kate Bush) na oge nke World AIDS Day na 2006. Otú ọ dị, Coververze nwere aha dị nnọọ iche ma bụrụ "Akwụsịla (Africa)". Alicia na Bono chọrọ igosi na Afrika naanị nwere nde mmadụ iri abụọ na ise metụtara ọrịa AIDS na nde mmadụ iri anọ n'ụwa dum.
Ọ gara mba ndị dịka Uganda, Kenya na South Africa iji kwado nlekọta nke ụmụaka nwere ọrịa AIDS. Dika onye nnọchianya na onye-nchoputa nke Na-edebe Nwa Ya. Ọ ghọwokwa onye na - ekwuru maka ọrụ ebere nke Frum tha Ground Ground, nke na - akpali ma na - akwado ndị America na - eto eto iji nweta ihe ịga nke ọma n'akụkụ niile. Alicia na-ekerekwa òkè na ọrụ dị iche iche nke ndị mmadụ na 2005. Na July, ọ rụrụ na Filadelfia na Live 8 n'ụwa niile. Ozi nke ihe nkiri a bụ ịdọ aka ná ntị banyere ịdawanye ogbenye na mba Africa ma mee ka ndị nnọchianya G8 gbaghara ụgwọ ndị Africa. Na August, 2005 rụrụ na ngosi ngosiReAct Ugbu a: Music & Enyemaka, nke na-agbasa ụlọ ọrụ egwu. Ebumnuche bụ ịkpata ego maka ifufe Katrina mebiri emebi. Otu ọnwa mgbe nke a gasịrị, ọ gara na-egwu egwu yiri nke ahụChebe onwe ya pụọ ​​na Oké ifufe: Egwuregwu maka Oké Osimiri Gulf. Na July, 2007 ọbụna bụrụ abụ na Live Earth na New Jersey.